Mohammed Bin Salman oo billaabay qorshe ku wajahan Taalibaan – Muxuu sameeyey? | Caroog News
Mohammed Bin Salman oo billaabay qorshe ku wajahan Taalibaan – Muxuu sameeyey?
Sacuudi Carabiya ayaa raadineysa door cusub oo ay ku yeelato Afghanistan kadib qabsashadii Taalibaan, waxayna caawimaad ka raadin kartaa Pakistan, xilli Qatar oo ay xifaaltamaan ay kusoo baxday dalka ugu saameynta badan Afghanistan.
Dhaxal-sugaha Sacuudiga Mohammed bin Salman ayaa madaxii hore ee sirdoonka boqortooyada Turki al-Faisal u xil saaray inuu dib usoo cusbooneysiiyo xiriiradii uu la lahaa hoggaamiyayaasha Taalibaan, oo uu la macaamilay 20 sano kahor.
Turki al-Faisal, oo 76 jir ah, ayaa ahaa madaxa sirdoonka Sacuudiga, intii u dhaxeysay 1979-kii ilaa 2001, wuxuuna kaalin ku lahaa isku xirka mujaahidiintii Afghanistan ee la dagaalamay Midowga Soviet ee kusoo duulay.
Sida ay ku warantay shabakadda Intelligence Online, Faisal ayaa dhowaan la kulmay Mullah Yaqoob, oo ah wiilka aas-aasihii Taalibaan Mullah Omar, wuxuuna sidoo kale Qatar kula kulmay Mullah Baradar.
Baradar ayaa ah madaxa siyaasadda Taalibaan, wuxuuna hoggaaminayey wada-xaajoodyadii ay kooxda la gashay dowladda Mareykanka ee dhaliyey inay ciidamada shisheeye ka baxaan dalkaas.
Kadib qabsashadii Taalibaan ee Afghanistan, Qatar oo ah dal yar oo ay xifaaltamaan Sacuudiga, ayaa waxa uu Mareykanka ammaan kaga muteystay sida ay gacan uga geysteen in kumanaan qof laga daad-gureeyo garoonka diyaaradaha Kabul.